Ahoana no fomba hahombiazan'ny Business E-Commerce mahomby: Torohevitra avy amin'ny Semalt
Rehefa nanokatra fivarotana e-varotra mihazakazaka izy dia miankina tanteraka amin'ny fahombiazany ny fahombiazanyMaro ny antony, ny ankamaroan'izy ireo dia miady manodidina ny SEO. Olona maro no mahita fa sarotra ny manatanteraka izany amin'ny e-varotra noho ireo fahasarotana maro samihafatoy ny safidy amin'ny vokatra, ny niche, mamorona tranonkala, ny fampivoarana ny SEO sy ny paikady ara-barotra, sns.
Amin'ity vanim-potoana niomerika ity dia misy tranokala e-commerce maro. Rehefa misy ianaompikaroka, sarotra ny mahafantatra izay toerana tokony haparohanao. Jack Miller, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia maneho ireo SEO maromaro, izay mety hisy fiantraikany tsara amin'ny orinasanao e-varotra - mikrotik rb2011l rm reset password.
Fanokafana magazay e-varotra
Rehefa manokatra orinasa e-varotra dia tsara ny mifidy lama-tery, izaytsy manana fifaninanana ambany. Zava-tariby goavana no niaina fifaninanana mafonja avy amin'ireo toeram-pivarotana efa misy, toa an'i Alibaba syAmazon. Ny fahombiazan'ny SEO dia mety ho sarotra satria ny fahefana anananao dia tsy afaka mifanaraka amin'ny lazany sy ny hevitrao. Manao ny tsara amin'ny toy izanytetikasam-barotra, mila:
Ny fahalalana sy ny fanadihadiana ampy momba ny tsenanareo
Ny fahaiza-manao marketing sy e-varotra an-tserasera
Mpamatsy azo antoka ny vokatrao toy ny mpiara-miasa ary
Renivohitra ny manankina fahaizana bebe kokoa ary mandoa vola ho an'ny fitaovana vitsivitsy
Ny fitaovana maotera tsotra toy ny finday niche sy ny Google AdWords dia afaka manampy anaofikarohana sasantsasany momba ny niche sy ny teny fanalahidy izay ampiasaina amin'ny votoatin'ny tranonkala..Ny dokam-barotra mitandrema dia mety hanampy anao hanatratra olona izayeo amin'ny sambo nokendrenao amin'ny alalan'ny fitaovana maoderina toy ny doka Facebook.
Mampiasa ny herin'ny entana misotro
Maro ny mpivarotra dizitaly maniry hampiasa ny entana misotro, satria manala ny filàna izanynoho ny fitazonana ny firaketana na ny fifampiraharahana amin'ny entam-barotra. Izy ireo dia mandefa ny singa mivantana amin'ny adiresy fandefasana entin'ny mpividyny tranonkalanao. Vokatr'izany, misy ny fizarazarana ny asa sy ny fanabeazana. Ny antoko rehetra dia mandray anjara amin'ny zavatra tsara ataony.Amin'ny maha-dokam-barotra nomerika, ity safidy ity dia afaka manome anao fahafaha-manana fahafahana manokana amin'ny sehatra an-tserasera toy ny SEO fa tsy vokatrafilana. Na izany aza, ny fandefasana indray dia misy fetra voafetra. Ohatra, ny tsenan'ny tombombarotra dia tena ambany ary ny mpivarotratsy mijery ireo vokatra samirery.
Ny orinasa mpamokatra dia afaka mahatratra ny mpanjifa
Ny orinasa izay manana asa voalohany dia famokarana vokatra azo avy amin'ny fahombiazanatranonkala e-commerce. Ny raharaham-barotra izay mamokatra sy mividy marika iray dia:
Manokatra tranokala iray hivarotra ny vokatra ho an'ny mpanjifa
Amidio ny marika eo amin'ny tsenan'ny vokatra maro toy ny Amazon
Amidio ny mpivarotra sy ny mpividy ny asany mba handrava ny ankapobeny na
Ny fitambaran-javatra roa na ny fomba rehetra etsy ambony
Sarotra ny manomboka sy miasa amin'ny fandraharahana. Izany no antony maha-zava-dehibe izanyho an'ny dokambarotra nomerika hamokatra vokatra avy amin'ny sehatra samihafa ary mamorona marika manokana.
E-varotra dia sehatra maro misy fomba maro. Mpandraharaha maro no mahafantatra momba nyny fahafahana tsy manam-paharoa amin'ny marketing dizitaly, saingy misy fahasarotana ny manapotika azy tanteraka. Ohatra, tranonkala ara-barotra isan-karazanyny fahasarotana ny mahita ny mpanjifa avy amin'ny aterineto midadasika. Amin'ny fampiasana ireo toro-hevitra ara-barotra nomerika etsy ambony, dia afaka manatontosa orinasa e-commerce mahomby amin'ny aterineto ianaoary mitazona fandrosoana maharitra.